Indlu epholileyo eMazantsi eIceland
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguSigga
Kutshanje ukwakhiwa kwendlwana kumazantsi e-iceland, ebekwe ngaphandle kwedolophu encinci yaseHvolsvöllur, kuphela iikhilomitha ezi-3 ukusuka edolophini. sinikezela ukuba uhlale uphumle ngombono omkhulu we-volcano Hekla, kuninzi ukubona kufutshane ne-Hvolsvöllur, umzekelo iintaba-mlilo ezifana ne-Eyjafjallajökull, iingxangxasi ezifana ne-Seljalandsfoss okanye i-Skógarfoss. I-cottage ifakwe ikhitshi kodwa ukuba awuziva uthanda ukupheka kukho iindawo zokuphumla ozikhethayo kwindawo.
I-cottage ikhululekile kwaye ikhululekile, ihlala abantu abathathu. kwaye unendawo yokupheka. Iindwendwe zethu zisixelele ukuba zaziza kuhlala ixesha elide kwi-cottage yethu kuba ikhululekile kwaye ikwindawo entle eMzantsi we-Iceland.
4.95 · Izimvo eziyi-474
Apha ebumelwaneni bethu zininzi iindawo zokutyela ezinkulu, ezinokutya kwasekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Sigga
Sijonge ukukunceda ngazo zonke iintlobo zemisebenzi efana nokuqeshwa kwamahashe, ukhenketho lwekhephu, ukhenketho lwejeep kunye neendawo ezintle kubumelwane bethu. Siza kukunika imephu elungileyo yendawo yethu yendawo emazantsi e-Iceland.